एकल ह्यान्डल बाथरूम सिink्क नल क्रोम
घर / बाथरूमको नल / एकल ह्यान्डल बाथरूम नल / WOWOW क्रोम उच्च चाप बाथरूम नल
यसको पातलो लाइनहरू सहित र मिल्दो फिनिश पप-अप ड्रेन असेंब्ली समावेश सहित, यो एकल प्वाल बाथरूम सिink्क नल कुनै पनि स्थानमा उत्कृष्ट थप हो।
कहिले पनि अप्रचलित आकार दिईने: चाँदीको बेसिन नल २2321501१XNUMX०१ सी मिररको जस्तो क्रोम अन्तमा, भ्यानिटी डिजाइन जुन अति उत्तम छ, र हामीले प्यालेट गरे ट्रिपल-कर्भ जुन अद्वितीय छन्, तपाईंको बाथरूमलाई अधिक भव्य बनाउनुहोस्।
2321501C स्थापना निर्देशन
बाथरूम नल एकल ह्याण्डल 2321501C
ठोस ब्रासले बनेको स्टाइलिश बाथरूम नल सि single्गल ह्याण्डल खोज्दै हुनुहुन्छ? अगाडि नहेर्नुहोस्! WOWOW एक विशिष्ट डिजाइन बाथरूम नल एकल ह्यान्डल बनाएको छ, कि कुनै पनि बाथरूम सजावट को लागी एक स्टाइलिश मोड़ दिन्छ। WOWOW का डिजाइनरहरू यसको बाथरूम faucets को साथ विशेष स्पर्श दिन सँधै नयाँ तरिकाहरू खोजिरहेका हुन्छन्। यो विशेष बाथरूम नल एकल ह्याण्डल एक अद्वितीय tripe- घुमाइएको डिजाइन सुविधा। तपाईले यो डिजाइन अरु कतै देख्नु हुने छैन र निश्चित रूपमा तपाई बाथरूमको नल किन्नुहुनेछ जुन एक प्रकारको हो। यो अमेरिकी-पेटन्ट ट्रिपल-घुमाइएको डिजाइन कुनै नियमित बाथरूम सिंक एक भव्य बाथरूम सिंकमा सुधार गर्दछ। कुनै श doubt्का बिना!
जब तपाईं नयाँ बाथरूमलाई नयाँ डिजाइन गर्नुहुन्छ वा डिजाइन गर्नुहुन्छ, तपाईं आफ्नो बाथरूमको नलहरूमा विशेष ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। प्राय: बाथरूमको नलहरू केवल परियोजनाको अन्त्यमा मात्र छनौट गरिन्छ जब बजेट सीमाहरू लगभग पुगेका हुन्छन् (वा ओभरपास पनि गरिन्छ)। यस अवस्थामा, तपाइँले बेवास्ता गर्नुपर्दछ कि तपाइँको बाथरूमको नलको बारेमा गलत छनौटहरूको कारण तपाइँको बाथरूम डिजाइन खतरामा छ। WOWOW बारम्बार प्रमाणित गर्दछ कि उच्च गुणवत्ताको बाथरूम faucets किफायती मूल्यमा आउन सक्छ। र अझै पनि एक उत्कृष्ट डिजाइनको साथ यसले तपाइँको बाथरूम डिजाइनमा एक सुरुचिपूर्ण, उत्तम, र / वा समकालीन स्पर्श जोड्दछ। WOWOW मा हामी विश्वस्त छौं कि हामी तपाईलाई प्राप्त गर्न सक्ने पैसाको लागि उत्तम मूल्य प्रस्ताव गर्दछौं।
पैसाको लागि उत्तम मूल्यको साथ बाथरूम नल एकल ह्याण्डल
WOWOW को बाथरूम नल एकल ह्याण्डल को गुणवत्ता निर्विवाद छ। यसको ठोस धातु सामग्री शीर्ष प्रदर्शनमा लामो टिकाऊपन प्रदान गर्दछ। तपाईंले यो याद गर्नुहुनेछ जब तपाईं WOWOW को बाथरूम नल एकल ह्यान्डल तपाईंको हातमा समात्नुहुन्छ। यो सस्तो बाथरूम फालहरूको तुलनामा अर्को लीग हो जुन तपाईले बजारमा फेला पार्न सक्नुहुनेछ। अर्कोतर्फ WOWOW ले कुनै पनि सामग्रीमा अर्थव्यवस्था लिएको छैन, यसको बाथरूम faucets को गुणवत्ता सम्झौता जोखिममा। र अझै, WOWOW को बाथरूम नल एकल ह्यान्डल अत्यधिक किफायती छ। त्यसकारण हामी भन्न सक्दछौं कि तपाईले पैसाका लागि उत्तम मूल्य फेला पार्नुहुन्न। नतिजा स्वरूप, हामी तपाइँलाई-०-दिनको पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी प्रदान गर्दछौं। यदि तपाइँ कम कीमतमा उस्तै बाथरूमको नल पाउन सक्नुहुनेछ, वा उहि मूल्यमा एक राम्रो-गुणस्तरको बाथरूम नल, हामी तपाईंलाई पूर्ण फिर्ती दिनेछौं। बिना प्रश्न सोधे।
उच्च चाप टाउको मा पानी बचत aerator सुविधा। यो उच्च प्रदर्शन Neoperl Aerator अधिकतम आराम गर्न को लागी एक सहज र कोमल पानी प्रवाह प्रदान गर्दछ। तपाईंले पानी छर्कने बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। थप लाभ यो छ कि तपाईं पानीको percent० प्रतिशत बचत गर्न सक्नुहुन्छ यस अभिनव सुविधाको साथ बाथरूमको नल एकल ह्यान्डल WOWOW को। तपाईं यस एररेटरलाई सजिलैसँग हटाउन सक्षम हुनुहुन्छ, (समावेश गरिएको) उपकरण प्रयोग गरेर। यस तरिकाले तपाईले बारम्बार एररेटर सफा गर्न सक्नुहुन्छ, कडा अवशेषहरू हटाउँदै तपाईलाई उत्तम प्रयोगकर्ता अनुभव प्रदान गर्न।
उच्च-परीक्षण बाथरूम नल एकल ह्याण्डल
बाथरूम नल एकल ह्याण्डलको कम्पोनेन्ट्स धेरै पटक परीक्षण गरिएको छ तपाईंलाई उत्तम प्रदर्शन प्रस्तुत गर्न। उदाहरणका लागि सिरेमिक भल्भलाई ,500,000००,००० पटक प्रयोग गरीएको थियो। र अझै पनि, यी सबै परीक्षणहरू पछि, भल्भले सजिलैसँग, ड्रिप-फ्री, र चुहावट-अप संचालन गर्न जारी राख्यो। एक औसत घर मा मात्र बाथरूम नल प्रयोग गर्न सक्छ 10,000 प्रति वर्ष भन्दा कम पटक। यसको मतलब यो हो कि तपाई यस बाथरूमको नल एकल ह्याण्डल धेरै वर्षसम्म प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, यसको इष्टतम प्रदर्शन गुमाए बिना।
WOWOW मा हामी हाम्रो बाथरूमको नल एकल ह्याण्डलको गुणस्तर र प्रदर्शनको बारे विश्वस्त छौं। नतिजा स्वरूप, हामी तपाईंलाई3बर्षे वारंटी अवधि प्रस्ताव गर्न डराउँदैनौं। यदि बाथरूमको नल एकल ह्याण्डलले यी years बर्षको अवधिमा राम्रो प्रदर्शन गर्दैन भने, हामी तपाईंको बाथरूम नल एकल ह्याण्डललाई नयाँ ब्रान्डको साथ बदल्छौं। यस तरिकाले, तपाइँ तपाइँको बाथरूम सिंक नलको निरन्तर प्रदर्शनको सुनिश्चित हुनुहुन्छ। हामी हाम्रो जिम्मेवारीलाई गम्भीर रूपमा लिन्छौं र यसलाई कुनै श doubt्का बिना नै लिन्छौं। कुनै चीजको लागि होइन हामीसँग विश्वभरिबाट वफादार ग्राहकहरूको द्रुत-बृद्धि भइरहेको समूह छ।
प्रयोगकर्ता मैत्री बाथरूम नल एकल ह्यान्डल
पानी प्रवाह र यसको तापक्रम सजिलैसँग यस बाथरूमको नलको एकल ह्याण्डलको साथ नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। तपाईं केवल एक हातले पानीको तापक्रम व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुनेछ, जबकि तपाईंको अर्को हात व्यस्त छ, उदाहरणको लागि जब तपाईं दाँत माझिरहनु भएको छ। तपाईं तुरून्त अपरेशनको सहजता याद गर्नुहुनेछ जब तपाईं यो उच्च-गुणवत्ता भल्भ प्रयोग गर्नुहुनेछ। यो ह्याण्डल अपरेट गर्न प्रत्येक पटकको लागि खुशी हुनेछ।
WOWOW को क्रोम बाथरूम नल एकल ह्यान्डल क्रोम ओभरफ्लोको साथ एक समावेश पप-अप स्टपरको साथ आउँदछ। यो पप-अप स्टापरले तपाईको बाथरूमको नल एकल ह्यान्डलको साथ एकता बनाउँदछ, तपाईंको भान्साको सजावटमा अझ ठूलो प्रभाव पार्न। यो पप-अप ड्रेन स्टापर सजिलैसँग एकल प्रेसको साथ संचालन गर्न सकिन्छ। यसलाई केवल एउटा चाहिन्छ
सञ्चालन हुनको लागि अलि अलि बढी दबाब। यसको व्यावहारिक डिजाइनको कारण, यसले तपाईंको बाथरूम सि s्कबाट छिटो र शान्त रूपमा पानी निकाल्न सक्दछ।
किट बाथरूमको नल एकल ह्यान्डल स्थापना गर्दै
ठोस पित्तल सामग्रीको प्रयोगको कारण, WOWOW लेस-फ्रि पानी आपूर्तिको ग्यारेन्टी गर्न सक्दछ। यस तरीकाले, तपाईं आफ्नो परिवारलाई एक सुरक्षित पानीको अनुभव दिन सक्नुहुन्छ र तपाईंले पानीको गुणस्तरको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। कमसेकम तपाईको बाथरूमको नलको कारणले होईन। र यसको स्थायित्वका कारण, WOWOW को बाथरूम नल एकल ह्याण्डलले धेरै, धेरै बर्षको लागि यस प्रदर्शनको ग्यारेन्टी गर्न सक्छ।
WOWOW को बाथरूमको नल एकल ह्यान्डलको ठूलो सुविधा यो हो कि तपाइँ आफैले प्लम्बरलाई काम नगरी स्थापित गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यो बाथरूम नल एकल ह्याण्डल अन्य बाथरूम faucets भन्दा फरक डिजाइन गरीएको थियो र मात्र 30० मिनेटमा स्थापना गर्न सकिन्छ। जब तपाईं पेशेवर हुनुहुन्न। WOWOW को बाथरूम नल एकल ह्यान्डल एक्सेसरीजको पूर्ण किटको साथ आउँदछ जुन एक सहज स्थापना प्रक्रियाको ग्यारेन्टी गर्दछ:-इन्च डेक प्लेट (जुन १- and र hole-होल प्रिड्रिल्ड बाथरूम सिंक दुवैसँग मेल खान्छ), एक क्रोम पप-अप ड्रेन, २० ईन्च प्रतिरोधी Tucai पानी नली ग्यारेन्टी गरिएको गुणवत्ता, स्थापना दस्तानेहरू, एक aerator हटाउने उपकरण, र अधिक संग। यस तरीकाले, यसो गर्न सजिलो छ - आफैंले WOWOW को बाथरूम नल एकल ह्यान्डल स्थापना गर्नुहोस्।
संक्षेप मा बाथरूम नल एकल ह्याण्डल को लाभहरु:
Water पानीको प्रवाहको सहज अपरेशन
। अद्वितीय र सुरुचिपूर्ण डिजाइन
। उच्च प्रदर्शन सामग्री
Do यो आफै गर्नुहोस् स्थापना किट समावेश गर्नुहोस्
SKU: 2321501 XNUMX१C विभाग: बाथरूमको नल, एकल ह्यान्डल बाथरूम नल टैग: समाप्त पॉलिश, lavtory नल, एकल हैंडल
पॉलिश गरिएको क्रोम